Sampana toekarena – Vondrona afrikanina: mampihena ny fiankinan-doha any ivelany ny harena misy | NewsMada
Sampana toekarena – Vondrona afrikanina: mampihena ny fiankinan-doha any ivelany ny harena misy
Tatitra roa lehibe navoakan’ny sampana misahana ny toekarena ao amin’ny Vondrona afrikanina (UA), omaly, tao amin’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny, ny ady amin’ny kolikoly, sy ny ho fampandrosoana ny toekarena aty Afrika amin’ny alalan’ny fampihodinana ny harena ato anatiny.
« Very 50 miliara dolara isan-taona ny firenena afrikanina 55 mpikambana ao amin’ny UA, noho ny kolikoly avo lenta, ny famotsiam-bola”, hoy ny Pr Harison Victor, Malagasy mitarika ny sampana misahana ny toekarena ao amin’ny UA. Miantso ny mpikambana rehetra io sampana io hanome lanja, hitrandraka ny harena ato anatiny, indrindra hanodina ny akora fototra eto an-toerana fa tsy aondrana avy hatrany any ivelany. « Mampihena ny fiankinan-doha amin’ireo mpamatsy vola avy any ivelany izany, izay tsy maintsy manaraka ny baikon’izy ireo koa; amin’izao fotoana izao, mihena izay fanampiana avy any ivelany izay », hoy ny Pr Harison Victor.
“Tsy fantatra marina ny harena eto Madagasikara, isika anefa, firenena fahadimy aty Afrika manana terres rares*, ankoatra ireo harena maro hafa sy ny ranomasina. 130 miliara dolara isan-taona no ilain’i Afrika ho an’ny fotodrafitrasa, nahoana isika tsy manome lanja ireo harena rehetra ireo fa miandry lava fanampiana avy any ivelany ?”, hoy ihany ny Pr Harison Victor.
Afaka manodina tsara ny harena eto an-toerana ny orinasa afrikanina. Mila fanampian’ny fanjakana anefa izy ireny hametraka tontolo ahafahan’izy ireo miasa tsara mba hiroborobo. Noraisin’ny Pr Harison Victor ho ohatra ny fanodinana diamondra any Botswana, iarahan’ny fanjakana sy ny tsy miankina.
Tsy mahita tombony ny maro amin’ny orinasa afrikanina, anisan’izany ny eto Madagasikara, nefa manana tsena malalaka. Tsy maharaka ny fifaninanana, ho an’ny tsena ato anatiny na any ivelany. 18 % amin’ireo indostria mitrandraka ny tsena any ivelany ihany no mahavita izany mihoatra ny telo taona.
Misy ihany anefa ireo firenena afrikanina mandray fepetra ho fanarenana ny toekarena any aminy sy manohy ny ezaka efa ataony. Namoaka boky misy tatitra arahina vahaolana ho fanomezan-danja ny harena ato anatiny ny sampana misahana ny toekarena ao amin’ny UA. Tokony hijery izany akaiky ny mpitondra eto amintsika.
Terres rares* : Itambaran’ny Scandium 21Sc ; Yttrium 39Y , sy 15 Lanthanides.